Inuu Shumac shidan jiray, inuu sariir la’aan ahaa yaraantiisii, shaqadii adkayd ee uu qaban jiray Aabihiis, Gurigiisa qasriga ah & Lacagaha Malaayiinta dollar ah ee uu Neymar Jr ku iibsaday Diyaarad Helicopter ah! – Gool FM
Inuu Shumac shidan jiray, inuu sariir la’aan ahaa yaraantiisii, shaqadii adkayd ee uu qaban jiray Aabihiis, Gurigiisa qasriga ah & Lacagaha Malaayiinta dollar ah ee uu Neymar Jr ku iibsaday Diyaarad Helicopter ah!
Haaruun July 24, 2021
(Rio de Janeiro) 24 Luulyo 2021. Warbixinteenna waxaan ku soo qaadanaynaa inuu Shumac shidan jiray, inuu sariir la’aan ahaa yaraantiisii, shaqooyinkii adkaa ee uu Aabihiis qaban jiray, Gurigiisa qasriga ah iyo Lacagaha Malaayiinta dollar ah ee uu haatan Neymar Jr ku iibsaday Diyaarad Helicopter ah.
Waxaan diiradda ku saanaynaa muuqaalkaan noloshii adkayd ee uu soo maray Neymar iyo diyaaradda nuuca qumaatiga u kacda ee sida gaarka ah loogu farsameeyay weeraryahanka kooxda Paris Saint Germain iyo xulka Bazil Neymar Junior? Imisa Milyan oo dollar ayay joogtaa Helikobtarta cusub ee Neymar xaggeese lagu farsameeyay?.
Neymar da silva Junior oo ku nasanaya gurigiisa ku yaalla Magaallada Rio de Janeiro ee Waddanka Brazil, isla markaana ka meyranaya guuldarradii Copa Amerika ee ay kala kulmeen xulka Argentine oo 1-0 ku qaaday Koobkii Ameerika ee 2021 ayaa waxa uu soo bandhigay Diyaaraddiisa cusub ee nuuca qumaatiga u kaca ah ee ay farsamaysay shirkadda Mercedes Benz ee Waddanka Jarmalka.
Sawir uu ciyaaryahan Neymar la wadaagay taageerayaashiisa barta Instagram ee gaaraya 155 milyan oo raacdeyaal ah ayaa ku soo bandhigay Helikobtartiisa cusub ee qiimeheedu yahay 15 Milyan oo dollar ah, taas oo uu qaybteeda dambe ama seynteeda diyaaraddaan lagu qoray magaciisa oo la soo gaabiyey Njr.
Diyaaraddan Helikobterta ah ee nooceedu yahay Airbus Mercedes H-145 ayaa ah nuucii ugu dambeeyay ee ay soo saartay shirkadda gawaarida farsamaysa ee laga leeyahay Jarmalka.
Neymar oo ah xiddiga ugu qaalisan guud ahaan kubadda cagta, maadaama kooxda Paris Saint Germain ay 2017-kii ku iibsatay 262 milyan oo dollar, taasoo ahayd labo jibbaar intii uu ku qiimeysnaa xiddigii ugu qaalisanaa adduunka waqtigaasi.
Guriga uu deggan yahay Neymar oo ku yaalla meel 95km u jira xeebta caanka ah ee Riyo de Janeero ayaa isaga qudhiisu ku fadhiya 10 milyan oo dollar, waana qasri aad u weyn oo leh goob ay diyaaraduhu ku degaan, barkadaha dabaasha, garoommo lagu ciyaaro kubadda caga iyo tenniska iyo dhul beereedyo baaxad leh, sida caadiga ahna wax la la yaabo ma’ahan in ciyaaryahan xirfadle kubadda cagta ah uu malaayiin dollar ku dhisto guryo ama uu ku socdo baabuurta kuwooda ugu qaalisan maxaa yeelay intaa iyo in ka badan ayuu mushaar ahaan u qaataa sanad walba.
Ciyaaryahan Neymar oo Milyaneer ah, mushaar ahaanna sanadkii u qaata 36.8 milyan oo dollar ayaa yaraantiisii isaga iyo qoyskiisu ay ku soo koreen nolol aad u adag oo faqrinimo ah, waxaana Aabihii uu ahaa mid adduunyadu ku cuslaatay oo faqiir ah, taasoo keentay in guriga Neymar uusan lahayn koronto, taa beddelkeedana ay qoyskoodu shidan jireen Shumaca illaa markii dambe Neymar iyo walaashii Rafaela ay nolol ka raadiyaan guriga Ayeydood.
Haddii aan wax yar ka taabanno noloshii adkeyd ee uu ku soo barbaaray xiddigii hore ee Barcelona Neymar Jr oo maanta 15 Milyan oo dollar diyaarad ku iibsanaya waxaa taariikhda ku qoran in Neymar iyo Walaashiis Rafaela aysan haysan sariir ay ku seexdaan, taa beddelkeedana ay heysteen hal Firaash ama hal Joodari oo dhulka la dhigi jiray oo ay labadan walaalaha ku wada seexan jireen.
Neymar Aabihiis ayaa mar uu haatan ka hor wareysi siiyay Wargeyska The Mirror ee ka soo baxa Ingiriiska wuxuu sheegay in xaafaddii uu ku dhashay wiilkiisa Neymar ee Mogi das Cruzes ay ahayd xaafad sabool ah oo qashinka Magaallada Sao Paulo oo dhan lagu soo daadiyo, halkaas oo ahayd meel ay ku badan yihiin dadka saboolka ah isla markaana ay ku badan yihiin dembi jiifyada.
Aabaha Neymar waxa uu ka soo shaqeeyay shaqooyin ad adag, sida xamaaliga, makaanikada iyo dukaan iibiye si uu u dabaro nolosha qoyskiisa, waxaana uu wiilkiisa Neymar ka soo qoray koox Futsalka ciyaarta, maadaama uu inta badan kubadda ku ciyaari jiray dariiqyada.
Neymar aabihii wuu ugu talo galay in uu canuggiisa yar ka baaro wax uun xirfad kubadda cagta ah, waxaase dhacday in dhowr sanadood kaddib uu Neymar noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa dhammaan ardaydii Futsalka ciyaari jirtay ee ay isku xaafadda ahaayeen, isagoo la soo baxay farsamooyin cajiib ah, goysmo waalan, caga wareejis iyo gool dhalin.
2003 waxaa Neymar qoyskiisa soo wacay naadiga Santos oo u soo bandhigay heshiis ay kula wareegayaan xiddigan da’da yar, qandaraaskaas oo ahaa midkii ugu farxadda badnaa ee soo mara qoyska Neymar.
Markii uu 14-sano jirka ahaa Neymar magiciisa inta badan way yaqaanneen naadiyada waa weyn ee qaaradda Yurub, waxaana kooxihii u yeeray ka mid ahaa Real Madrid oo kuliyaddeeda kubadda cagta ku casuuntay Neymar iyo Aabihiis sanadkii 2006, iyadoo Neymar iyo Aabihii ay u safreen Spain, si ay ula soo kulmaan Madaxda Real Madrid.
Laakiin nasiib darro xilligaasi Real Madrid carruurta yar yar waqti uma haynin, maadaama ay safkeeda ka ciyaarayeen Ronaldo, Robinho, Zinedine Zidane, Roberto Carlos iyo David Beckham, wada hadalladii u socday qoyska Neymar iyo Real Madrid ayaa guuldarro ku dhammaaday kaddib markii Neymar Aabbihii uu ku qanci waayay heshiiskii ay Real Madrid u soo bandhigtay, waxaana uu go’aansaday in uu wiilkiisa yar dib ugula laabto kooxdiisii Santos, isla markaana uu sugo illaa inta uu ka weynaanayo wiilkiisa Neymar.
Ciyaaryahan Neymar ayaa markii uu wacdaro ka dhigay Horyaalka Brazil iyo naadigiisa Santos oo uu kula guuleystay koobab badan, waxaa 2013-kii la wareegtay kooxda Barcelona ee waddanka Spain, halkaasoo uu ku qaatay guulo waa weyn ilaa sanadkii 2017-kii uu ka mid noqday kooxda uu haatan ka tirsan yahay ee PSG.
Intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixintii diyaaradda cusub ee 15-ka Milyan ee dollar uu ku soo iibsaday xidigga kooxda Paris Saint Germain iyo xulka Brazil Neymar oo ka meyranaya noloshii adkeyd ee saboolnimada ahayd ee uu ku soo barbaaray yaraantiisii.
Fernandes, Maguire, Cavani & 12-ka xiddig ee uu Macallin Ole Gunnar Solskjaer keenay Kooxda Manchester United
Antoine Griezmann oo ku wargaliyay Barcelona kooxda uu doonayo inuu u dhaqaaqo